Kubanjwe iphoyisa leba endaweni yesehlakalo | News24
Kubanjwe iphoyisa leba endaweni yesehlakalo
Johannesburg - Kubanjwe iphoyisa lomthetho lintshontsha imali endaweni yesehlakalo ePitoli, kusho umbiko wamaphoyisa aseGauteng.
Iphoyisa elisebenza ukuhlola amanyela ezandla la kwenzeke khona izehlakalo, lithwetshulwe yi-video lintshontsha imali kwaFruit and Vegetable, la beliyohlola khona ngemuva kwesehlakalo sokubamba inkunzi esenzeka emasontweni amabili edlule, kusho okhulumela amaphoyisa uNoxolo Kweza.
"I-video iveza iphoyisa licaphuna imali, ngemuva kokuthi litshele abasebenzi ukuthi abaphumele ngaphandle."
"Kuzokwenziwa uphenyo lwangaphakathi bese kuthathwa izinyathelo."
Ngokusho kukaKweza, iphoyisa leli langena embuthweni ngoMashi ka-2008.